Jade Garden Kachin land: ကျောက်စိမ်းအကြောင်းသိကောင်းစရာ ( Kachinland Jade )
Jade Garden Kachin land
Precious Jade From Kachin Land
ကျောက်စိမ်းအကြောင်းသိကောင်းစရာ ( Kachinland Jade )...
ကျောက်စိမ်းအကြောင်းသိကောင်းစရာ ( Kachinland Jade )
ကချင့်ကျောက်စိမ်း ဟဲ့ ကချင့်ကျောက်စိမ်း
ကျောက်စိမ်း ဟာ ကမ္ဘာပေါ် မှာ ၃ နေရာ ပဲ တွေ့ ရပါတယ် ။
အမေရိကန် နိုင်ငံ က တက္ကဆက်စ် ပြည်နယ် ၊ တရုတ် က ကွမ်ကျိုးပြည်နယ် ရယ် နဲ့့ ကျွန်တော် တို့မြန်မာ နိုင်ငံ က ကချင်ပြည်နယ် တို့ မှာပါပဲ ။(ကွမ်ကျိုး ဟာ မှားနေရင် ပြင်ပေးကြပါ)
ယနေ့ ထိ ၊ ဒီ၃ နေရာ က လွဲ လို့တခြား ဘယ်နေရာ မှာ မှ မတွေ့ ရသေးပါဘူး ။
ဒီ၃နေရာ ထဲ မှာ မှ ၊ ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံး ကျောက်စိမ်း ကို မြန်မာ နိုင်ငံ မှာပဲ တူးဖော် ရရှိနိုင်ပါတယ် ။
ဆိုလိုချင်တာ က ကျန် ၂ နေရာ က ထွက်တဲ့ ကျောက်စိမ်းဟာ မဖြစ်စလောက် အနည်းအကျဉ်းသာ ဖြစ်ပြီး ၊ အရည်အသွေး ကြ တော့ လည်း မြန်မာနိုင်ငံ ကို မမှီပါဘူး ။ ဒါကြောင့်မို့ လည်း မြန်မာ့ ကျောက်စိမ်း ဟာ ကမ္ဘာမှာ နာမည် ကျော်ကြား နေရတာပါ ။
ကျောက်စိမ်း ကို ဘယ်နေရာ တွေ မှာ သုံးသလဲ ဆိုရင်….ပုတီး၊လက်ကောက် ၊ဆွဲပြား ၊ ဘုရားဆင်းတု ၊ ပန်းပု ထုခြင်း ၊ ကျောက်စိမ်းပန်းချီ စသည်ဖြင့် သုံးခဲ့ကြပါတယ် ။
ယနေ့ တိုးတက်လာတဲ့ ခေတ်ကြီး မှာတော့ ပိုက်ဆံ တတ်နိုင်သူများ ဟာ ကျောက်စိမ်းကို ပါကေးပြား အရွယ် ထုတ်လုပ် ပြီးနေအိမ်တွေ မှာ ပါကေးတွေ ခင်းလာပါတယ် ။
( ချမ်းသာကြွယ်ဝ မှုပေါ့)
အိမ်တွေ မှာ မီးဆိုင်းတွေ ကို ကျောက်စိမ်း တွေ နဲ့ ထုတ်လုပ်လာတယ် ။
ကားတွေ ထဲ က ဖင်ထိုင်ခုံ အောက်မှာ ကျောက်စိမ်းလုံးလေး တွေ ကို အခင်းသဖွယ် ယက်ပြီး ခင်းကြတယ် ။
ကျောက်စိမ်း ရဲ့ သဘောသဘာဝ က အအေးဓါတ်ရှိပါတယ် ။
ရေနံသူဌေး နိုင်ငံတွေ ဖြစ်တဲ့ ၊ အာရပ် တွေ ဆီ မှာ ဆိုရင် ကျောက်စိမ်းကုတင် ၊ ကျောက်စိမ်း ထိုင်ခုံ စသည်ဖြင့် သုံးစွဲ ကြပါတယ် ။
ကျွန်တော် သိခဲ့ ရတဲ့ ယမ်း ( crystal ) အကြောင်းလေး ရေးပြပါမယ် ။
သာမန် လမ်းဘေး က ကျောက်တုံး တစ်တုံး နဲ့ကျောက်စိမ်း တုံး(အရိုင်းတုံး)နဲ့ ၊ ဘယ်လို ခွဲ ခြား မလဲ ဆိုရင်…
ကျောက်စိမ်းတုံး အရိုင်းတုံး တွေ ကို နေရောင်အောက် မှာ အနီးကပ် ကြည့်လိုက်မယ် ဆိုရင် ၊ လက်လက် လက်လက် နဲ့ လက်နေတဲ့ အမှုန် လေး တွေ ကို မြင်ရပါမယ်
အနီးစပ်ဆုံး ဥပမာ ပေးရရင် ၊ စာရွက် အဖြူ တစ်ရွက်ပေါ်မှာ ဘောပင် နဲ့ အစက်ကလေးတွေ ချလိုက်သလို ပါ ။ အစက်လေးတွေ ပါ ။ လက်နေပါတယ် ။ မှောင်တဲ့ နေရာမှာဆိုရင်တော့ ကျောက်ကြည့် ဓါတ်မီး နဲ့ ထိုးကြည့်ရင် မြင်ရမှာပါ ။
( ဒီနေရာ မှာ ပြောချင်တာ တစ်ခု က တော့ ၊ ရွှေတို့ ငွေတို့အစရှိသဖြင့် အခြား သတ္တု များ ပါဝင်တဲ့ ကျောက်ရိုင်းတုံး မှာလည်း လက်လက် လက်လက် တောက်နေပေမယ့် ၊ ကျောက်စိမ်း နဲ့ တော့ တခြား စီပါ ။ ရွှေ တို့ ငွေ တို့ မှာ လက်လက် လက်လက် က သူ့ အရောင် အလိုက် တောက်ပါတယ် ။ )
အဲဒီ လက်လက် လက်လက် လေးတွေ ကို ယမ်း လို့ ခေါ်ပါတယ် ။
ကျောက်စိမ်းအရိုင်းတုံး ကို ယမ်းပါဝင်မှု ၊ ယင်း ပါရှိမှု ပုံစံ ကို ကြည့်ပြီး ကျောက်စိမ်းအရိုင်းတုံး ကို အခုလို ခွဲခြား လို့ ရပါတယ် ။
ယမ်းချောရင် အတွင်းက ကျောက်စိမ်းသား ချောပါမယ် ။ ( ဆိုလိုချင်တာ ယမ်း က မှုန်မှုန်လေး တွေ နဲ့ စုနေတာပါ )
ယမ်းစိပ် ရင် ကျောက်သား တင်းပါမယ် ၊ ကျောက်သား ကောင်းပါမယ် ( လက်လက်လေးတွေ စုနေတာပေါ့ )
အဓိက ယမ်း (၃) မျိုး ရှိပါတယ်
ယမ်းလုံး ဆိုတာ က ကျောက်ရိုင်းတုံး ရဲ့ အခွံ ၊ မျက်နှာပြင်မှာ လက်လက် လက်လက်လေး တွေ က ၊ သကြားပွင့် ဆားပွင့်လေးတွေ လို ဖြစ်နေတာပါ ။ အဲဒီ ကျောက်ဟာ အရည် ကောင်း ပါတယ် ။
ယမ်းရှည် ဆိုတာ က ကျောက်ရဲ့ မျက်နှာပြင် မှာ အပ်ချောင်းလေးတွေ လို ၊ ဟင်းချိုမှုန့် ရှည်ရှည်လေးတွေလို မြင်ရတာပါ ။ အဲဒါမျိုး တွေ့ ရရင်တော့ အဲဒီကျောက် ဟာ အသား ကောင်းပါတယ် ။
ယမ်းပြား ဆိုတာ ကတော့ လက်လက် လက်လက် လေးတွေ ဟာ အရမ်းကြီး အရွယ် ကြီးနေမယ် ။( ဆားပွင့် ၊ သကြားပွင့် အရွယ် ထက် ပိုမယ် ) ဒါဆိုရင် အရည်ရော အသားရော မကောင်းနိုင်ပါဘူး ။
ယမ်းပြား မှာ ကို ၃ မျိုး ထပ်ခွဲ နိုင်ပါတယ် ။
ယင်ထောင်ယမ်း ဆိုတာ က လက်လက် လက်လက် တောက်နေတဲ့ ယမ်းပေါ့ ။ ယင်ကောင် တစ်ကောင် အရွယ် ခန့် ရှိပါတယ် ။ သူပါရင် အရည်အသား မကောင်းဘူး ။ ဈေးအများကြီး မပေးသင့်ပါဘူး ။
မာယား ဆိုတာ က ယင်ကောင် အရွယ်ထက် ပိုကြီးမယ် ။ ရှောင်ရပါမယ် ။
ခွေးရိုးထိုး ဆိုတာ က တော့ မာယား ထက် အရွယ်ပိုကြီးတယ် ။ သူ့ ကို တွေ့ ရင် အဲဒီကျောက် ကို ရှောင်ရပါမယ် ။
ယမ်း ဆိုတဲ့ သဘာဝ ဟာ ၊ ကျောက်စိမ်း အရိုင်းတုံး ( မဖြတ်မှီ ) ရဲ့ အခွံ မှာ မြင်ရတဲ့ အတိုင်း ကျောက်သား အတွင်း မှာ ရှိတတ်ပါတယ် ။
ယင်း ကို ကျွမ်းကျင် ပိုင်နိုင် မယ် ဆိုရင် ၊ ကျောက် ကို မခွဲ မဖြတ် မှီ..ပြင်ပ က ကြည့်ရုံ နဲ့ ပင် ၊ အထဲ က ကျောက်သား ကောင်းမကောင်း ဖောက်ထွင်း သိမြင် နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ် ။
ကျောက်စိမ်းအရိုင်းတုံးဝယ်မယ်ဆိုလျှင်ကျောက်စိမ်း အခွံ အကြောင်း တွေ ကိုသိဖို့လိုအပ်ပါတယ် ။
ကျွန်တော် သိထား၊လေ့လာထားသမျှ လေး တွေ ကို ပြန်ဝေမျှ ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
သူငယ်ချင်းတို့လဲ ဒီပို့စ်လေးဖတ်ပြီး ဗဟုသုတ ရရှိနိုင်ပါစေလို့ဆန္ဒပြုရင်း......
Source from မောင်ပေ ( ကျောက်စိမ်းအကြောင်းလေးနဲနဲပြောကြရအောင် ဆောင်းပါးမှ)
ထူးထူးဆန်းဆန်း ၏စာမျက်နှာမှ ကူးယူဖော်ပြပါသည်။
Copyright 2011 Jade Garden Kachin land.All rights reserved. Powered by Envisioned wordpress | Zojirushi BBCCX20
By Blogger Templates.